Thwebula OpenVPN 1.1.17 – Android – Vessoft
OpenVPN Connect – a isofthiwe ukuxhuma isengezo senethiwekhi ezimele. OpenVPN Connect iqinisekisa ukuxhumana okuphephile kuya Wi-Fi, ukuhlala engaziwa futhi elondekile internet, ukufihla of-ikheli le-IP, ukuvulwa ukufinyelela izinsiza ivinjiwe njll Isofthiwe isebenzisa ifayela ekhethekile ukumisa ukuphatha isengezo senethiwekhi ezimele. OpenVPN Connect kwenza ukuvikela akhawunti yomsebenzisi futhi amaphasiwedi ngokumelene ukweba noma Nokugenca by the malware. Futhi OpenVPN Connect iqukethe module ukulawula ukusetshenziswa amandla kudivayisi olusekela imodi ukusetshenziswa ukuncipha battery icala ngesikhathi sokuguquka off of the screen noma ukuthola izinkinga uxhumano.
Baqinisekise usebenzisa of Wi-Fi
Ukuvikelwa kwedatha yomuntu siqu
Ukucasha of the-ikheli le-IP
Ukufinyelela izinsiza ivinjiwe
Ukuvikelwa kolwazi transfer iziteshi
Amazwana on OpenVPN:
OpenVPN Ahlobene software: